လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကယ်ဒမီသည်ကိစ္စရပ်များ၊ အိမ်ထောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ တတိယပါတီများမှလွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေသည်။ Rieter Professional Legal Credit Information Agency
သူမ၏ခံစားချက်များကိုမအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အိမ်ထောင်တွင်ဒဏ်ရာရဖွယ်ရှိသည်။
ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးတွင်လူတစ် ဦး ကိုသင် ပို၍ ဂရုစိုက်လေလေ၊ သင်နာကြည်းရလေလေဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ပိုချစ်တဲ့သူဟာအလွယ်တကူဒဏ်ရာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်သောလူများများလေ၊ မည်သို့လည်ပတ်ရမည်ကိုမသိသောသူများအားသူတို့ ပို၍ ထိခိုက်လွယ်လေဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ရလျှင်အချစ်၏အတိုင်းအတာသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနှင့်တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိပါ။ တန်ဖိုးနိမ့်ပါကချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
သူမ၏စိတ်ခံစားမှုများကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုမသိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ပါတီနှစ်ခုကြားတင်းမာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Rieter ခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏အကြောင်းပြချက်သုံးခုကိုဖော်ပြထားပြီးလူတိုင်းကဤမိုင်းကွင်းများကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
ပြproblemsနာများရင်ဆိုင်ရသောအခါထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုမရှိ၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ငြင်းဆန်ခြင်း၊ ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသောအခါရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဤပconflictိပက္ခကိုအချိန်ဖြုန်းရန်အချိန်လိုခြင်းရှိသော်လည်းငါမသိရ။ ဖြေရှင်း။ မရသေးသောဆန့်ကျင်မှုမှာကင်းထိုးထားသောကွာရှင်းခြင်းတပ်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
ကွာရှင်းမှုအမှုများတွင်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးရှိလာနိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှနှစ်ဖက်စလုံးမှအအေးမိအကြမ်းဖက်မှုကိုလေ့လာပြီးအကျွမ်းတဝင်လူစိမ်းဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သဘောမတူညီမှုများရှိပါကနှစ်ဖက်စလုံးကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြုသဘောဆောင်သောဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်အခြားတစ်ဖက်မှနားလည်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
လေးစားခံရရန်နှင့်နားလည်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးကောင်းသောအရာဖြစ်ပါစေ၊ လေးစားမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအပြန်အလှန်နားလည်မှုနှင့်လေးစားမှုဖလှယ်နိုင်ပါသည်။
များစွာသောသူတို့သည်လင်မယားနှစ် ဦး စကားများရန်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးအချို့သူများသည်မိမိတို့၏အကြီးအကဲများကိုပါပါဝင်လိုခြင်းသို့မဟုတ်အပြင်ပန်းအားလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကြောင်းပြောဆိုလိုကြသည်။ သင်သည်အခြားသူများနှင့်စကားပြောသောအခါသင်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရှုထောင့်မှပြောဆိုပြီးသင်ကိုယ်တိုင်မကူညီနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်မိသားစုအရွံရှာခြင်းကိုချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမပြုနိုင်ပါ၊ ပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ၊ အေးအေးဆေးဆေးပြောတာကပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ နောက်ပါတီကိုလည်းထိုင်ဝမ်ကိုမလာစေဘူး။
ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကကိစ္စတခုခုလုပ်လိမ့်မည်လား။ ဘယ်သူ့ပိုက်ဆံမရှိဘူးလဲ။ အမှားကြီး!
inertia ကိစ္စအတွက်အကြောင်းပြချက်? ဒီအချိန်ဟာဒီအချိန်ရဲ့အဆုံးလား။
အဘယ်အရာကမိန်းမများကိုအမှုတစ်ခုဖြစ်စေသနည်း။ စင်စစ်အားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ခံစားမှုကို ပို၍ အာရုံစိုက်ကြသည်
ဘာကြောင့် Primary Threes ဟာယောက်ျားတွေကိုချစ်ရတာလဲ Primary Threes ကဒီအားသာချက်များကိုရရှိသည်
ဘာကြောင့်လူတစ်ယောက် Primary သုံးကိုရှာတာလဲ။ သူဘာတွေတွေးနေခဲ့တာလဲ
လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒဏ္myာရီများစွာလော။ လက်မထပ်ရသေးသောသင်တို့အတွက်
ကွဲပြားသောအတွေးအခေါ်များရှိသည့်လူနှစ် ဦး သည်မိသားစုကိုအတူတကွစတင်ရန်သင့်တော်ပါသလော။
တတိယပါတီနှင့်ဆက်ဆံရန်သင်အလျင်အမြန်မသွားနိုင်ပါ၊ သူ့ကိုသာမိမိဆန္ဒအလျောက်အရှုံးပေး။ လိုလိုလားလားထွက်ခွာခွင့်ပြုနိုင်သည်။
တစ် ဦး ကိစ္စအကျပ်အတည်းမှာတော့သူမဖြေရှင်းရန်ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်!
အခြားတစ်ဝက်တွင်တတိယပါတီရှိပါသလား။ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ အတည်ပြုရန်ဤဆိုင်းဘုတ်များမှာကြည့်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အစဉ်အမြဲအလှဆုံးပါလား ကျွန်တော့်ဇနီးကဒီလှည့်ကွက်ကိုသုံးပြီးမှေးမှိန်နေသောပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
အမြဲတမ်းအားကောင်းနေသောပါတီသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားပါတီကိုမကြာခဏအထင်ကြီးစေနိုင်သည်။
ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန် NG အရှိဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်ရိုက်ချက်ကိုရိုက်ကူးထားသလား။
ငါ့ရှေ့မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပြန်ကောင်းလာနိုင် ဦး မလား။
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်သင်၏စိတ်ခံစားမှုဖြေလျော့ရန်ရှိသည်!